5 Mazano Ekubudirira Kwako Brand Brand | Martech Zone
5 Kiyi kune Yako Yakabudirira Yega Brand
Chitatu, Ndira 13, 2010 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Ndakaita hurukuro neimwe shamwari nhasi uye ndakawana email kubva kune mumwe achibvunza rairo yangu pamaitiro ekuvaka yavo yemhando ... uye pakupedzisira kuwana purofiti mairi. Iyi inogona kunge iri nyaya inopindurwa zvirinani neshamwari Dan Schawbel, a nyanzvi yekumaka… Saka tarisa kublog rake. Ini ndichagovana pfungwa dzangu pane zvandakaita mumakore gumi apfuura, zvakadaro.
Zvipe pachako kuti unoshuvira kuti uonekwe sei - ndinofunga vanhu vanoshamisika kana vachindiona ... ndakura, ndakagwinya, ndine mvere, ndachena musoro, uye ndinopfeka majean uye maT-shirts. Ini ndinoshuva uye ndinosveta nzira yangu kubudikidza nezuva. Pamhepo, ndinozviratidza ndichienderana nezvinangwa zvangu uye matarisiro andinoita vamwe vachazondiona. Hazvireve kuti ini kureva zvisizvo ini… handina. Handidi. Ini ndinochenjerera kuchengetedza yangu yepamhepo persona zvine hungwaru uye usaisa panjodzi yekuikanganisa nekudonhedza f-mabhomba kana kuyedza pachena kurerutsa vamwe vanhu kana mabloggi paInternet. Ndinogona kuvaudza kuti vari kukanganisa… asi zvakadaro ndinovaremekedza. 🙂
Usamborega kushanda nesimba kuti usvike. Handitendi mune basa / hupenyu hwakaenzana. Ini ndinofunga ndezvekupenga nekuti ndinoda zvandinoita uye ndinoda kuti zvive chikamu chezuva nezuva. Ndine nguva yakawanda yekunakidzwa uye yemhuri, futi. Nekudaro, ini handisi kuzoisa pangozi zita rangu nemabhizinesi andinoshanda nawo kuti ndiende kure kune vamwe shamwari. Ndine urombo, shamwari!
Enda kumusoro pamukana wese. Kana mukana ukauya kwandiri kublog, muenzi blog, kutaura, kunyora, kutaura, kubvunza, kumwa kofi… ndinodaro. Ini ndinofunga uyu ndiye mumwechete-mukurusa musiyano wevakawanda vakabudirira vanhu kana avo vanotambura nazvo. Kana mumwe munhu akandikumbira kuti nditaure pamusoro wenyaya ini ndisina kana ruzivo nezvayo, ini ndinosvetukira pairi. Ini ndichatsvaga mukati, Google iyo inobuda mairi, ndotsvaga dzimwe nyanzvi, ndobva ndapa hurukuro yakanaka. Ndiri pamabhodhi akati wandei uye ndinobatsira makambani mazhinji nevanhu sezvandinogona chero chikamu chezuva chero ripi zvaro.
Iva akatsunga pakukurukura kwako. Mavhiki mashoma apfuura ndakaudza chipangamazano pamusangano, "Handisi kukuudza izvi nekuti handibvumirani newe, ndiri kukuudza izvi nekuti warasika." Zvinonzwika zvakaomarara - ndinoziva ... asi zvakaburitsa mhepo kubva kumurume kuti arege kupfuudza pfungwa dzake dzisina musoro ndokumuita kuti atange kuchera muzvokwadi. Hakusi kuti ndinogara ndakarurama - ini handisi. Ndezvekuti kana ini ndine chivimbo, ini handirege ivo vanokanganisa vaparadze iko nekusundira kwavo kusagadzikana uye kusahadzika. Kune vakawandisa veavo vanhu munyika. Ini ndakura zvekutadza kuvateerera, saka ndinovapfigira mikana yese yandinowana. Nenzira iyoyo tinokwanisa kuwana rimwe basa kuti riitwe.
Reka kuteerera kune vanhu vari kukutadzisa. Amai vangu vakagomera pandakavaudza nezvebhizinesi rangu ndega. Mibvunzo yemabhenefiti, hutano uye mudyandigere zvakakurumidza kutevera chiziviso changu… ndosaka ndisina kutaura naAmai vangu pamberi Ndakatanga zvangu bhizimusi. Anondida nemoyo wake wese, asi haatende mandiri. Ouch, huh? Hazvina mhosva… ndinonzwisisa izvozvo… uye ndinomuda nemoyo wangu wese, zvakare. Ari kungoita zvisizvo. Iwe unogona kunge uine avo vakakukomberedza avo vari kuita zvakafanana. Rega kuvateerera. Iko kuisa chepfu kubudirira kwako.
Kwidziridzo: Kristian Andersen akaita basa rakanaka pa kutaura kune ako maronda mune iyi hurukuro (nekuda kwaPat Coyle nekuinongedzera):
Heino muenzaniso wemabatiro andinoita zvinhu… Ndakaverenga pane yaAndy Kushambadzira Pilgrim blog kuti Kushambadzira Pilgrim kwakasarudzwa kuve pane yakasarudzika runyorwa rweVakakurudzirwa Blogs yeMakambani Ekutungamira Networking Group (MENG). Yakakodzerwa… Kushambadzira Pilgrim ibhurogu yandaverenga mazuva ese.
Izvo zvakati… ini ndinoda pane izvo zvinyorwa. Not Haisi nyaya inokwikwidza… chinangwa. Ndinoda iyo Martech Zone kuti ionekwe seimwe yeakanakisa Kushambadzira Blogs paInternet futi. Isu tinoramba tichironga zvakanaka pane ese zvinyorwa uye kuverenga kwedu kuri kuramba kuchikura… asi ini ndoda kuenderera kuti list!
Ndiri kuzviita sei sei?
Ndatove zvinotevera vamwe of avo vanyora uye ini zvino ndave kuzobata base neumwe wevamwe mablogiki pagore rinotevera - kuburikidza nezvakataurwa, pamwe kuburikidza nezviitiko, tweeting yavo yezvakanaka zvemukati, nekubatanidza kudzoka kwavari kana vaine zvinyorwa zvikuru. Ndiri kuenda simba Ini pachangu mumambure avo.
Kumanikidza kurira kwakashata, asi handizvo. Kana iwe ramba uchimanikidza chinhu kwenguva yakareba zvakakwana, chinozofamba. Ini handisi kuzobiridzira, kunyepa, kuba, kubira kana kushandisa nzira yangu kupinda kunetiweki. Ndiri kungotanga kupa kukosha kwavari kudzamara ndazoonekwa semunhu anokosha. Kana izvozvo zvangoitika, mikova ichavhurika.
Izvi ndizvo zvakaratidza kubudirira kwandiri uye ini ndave kutanga kubatsirwa nazvo. Ini zvakare ndinodzoreredza chinenge zvese saka ndinoramba ndichisundira mari kunze mberi .. Ndinovimba rimwe zuva ndichava neakakura hombe 'ol pot, hazvo. Ini handinetseke nemari zvakanyanya (chete kushayikwa kwayo). Sezvo sekuvimba kwandinoita mandiri, ini zvakare ndine chivimbo mukupedzisira kubatsirwa kubva mukushanda nesimba.
Wakamirira chii? Zvipe pachako nenzira yaunoda kuti uonekwe, shanda nesimba, uye wedzera kumusoro pamukana wese. Carve yako nzira uye usamirira chero munhu kuti akuudze iwe kana uchigona kana zvaunogona kuwana.
Tags: nyora iweunozvitengesaka + aKeynoteKristian andersenPersonal brandingpowerpointmupiroslideshare
Kuunza Enterprise Analytics kuWordPress
Jan 13, 2010 pa 11: 08 AM